मुकेश अम्बानी जसको ड्राइभरले नै बुझ्छन् मासिक ३ लाख २० हजार – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on मुकेश अम्बानी जसको ड्राइभरले नै बुझ्छन् मासिक ३ लाख २० हजार
एजेन्सी । विश्वकै धनि व्यक्तिहरु मध्य पर्ने मुकेश अंबानीको जीवन शैलीको बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्छ। उनि भारतका सबै भन्दा धनि व्यक्ति भएका कारण पनि उनि दक्षिण एसिया क्षेत्रमा राम्रै चर्चा हुने गर्छ। उनका जीवन शैली देखि लिएर उनको लागि काम गर्ने स्टाफहरुको बारेमा पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ। विश्वका धेरै महंगा घरहरु मध्य एक पर्ने घरमा बस्ने गर्छन् मुकेश अंबानी। यसको अलावा उनिसँग ५०० भन्दा धेरै गाडी रहेको समेत बताउने गरिन्छ।
केही समय अगाडी सामाजिक संजालमा मुकेश अंबानीको ड्राइभरको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा भएको थियो। सामाजिक संजालमा एक भिडियो अपलोड गरिएको थियो। जसमा मुकेश अंबानीले ड्राइभरलाई कति तलब दिन्छन् भन्ने तथ्य देखाइएको थियो। साथै ड्राइभर चुन्ने तरिकाको विषयमा पनि भिडियोमा उल्लेख गरिएको थियो।
मुकेश अंबानीको घरको नोकर बन्न पनि धेरै गार्हो रहेको बताइने गरिन्छ। ड्राइभर छनोट गर्नको लागि एक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। उक्त कम्पनीले ड्राइभरको बारेमा गरेका तवरबाट परिक्षण गर्ने गर्छ। कुन सवारी चलाउंदा आइपर्ने अफ्ठ्यारो अवस्थामा कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराको विशेषतः परिक्षण हुने गरेको बताइएको छ।
प्राप्त जानकरी अनुसार मुकेश अंबानी आफ्नो ड्राइभरलाई धेरै राम्रो तलब दिने गर्छन्। जसका कारण उनको घरमा ड्राइभर बन्नको लागि मात्रै पनि धेरै पढे–लेखेका विद्वानहरु समेत अन्तर्वार्तामा भाग लिने गरेको बताइएको छ। उनको घरमा ड्राइभरले मात्रै २ लाख भारतीय रुपैंया, अर्थात नेपाली ३ लाख २० हजार पाउने गर्छन्। एक ड्राइभरको लागि यदि धेरै तलव धेरै उच्च मान्ने गरिन्छ।
कसरी छिट्टै धनी बन्ने ? दिनको ३०० करोड कमाउने मुकेश अम्बानी यसो भन्छन्
भारतका धनाढ्यको सूचीमा मुकेश अम्बानी एक नम्बरमा रहेका छन् । उनको सम्पत्ति बिगत एक वर्षदेखि अम्बानीको सम्पत्ति प्रत्येक दिन ३०० करोड भारतीय रुपैयाँले बढिरहेको हालसालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष अम्बानीको कुल सम्पत्ति ३,७१,००० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । उनको कमाइ दैनिक ३ सय करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा चर्चामा रहेको छ ।
उनै अम्बानीको जीवन सफलताको सूत्र हामी यहाँ उल्लेख गर्दैछौं–
संसारमा पैसा कमाउन र धनी बन्न चाहने सबै हुन्छन् । तर केही व्यक्तिले मात्रै आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छन् । भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानी पनि त्यस्ता थोरै व्यक्तिमा पर्छन् । बाबुले कमाएको धनलाई उनले आफ्नो मेहनत र लगनसिलताका कारण नयाँ उचाई दिए । सञ्चारमाध्यमबाट टाढै रहन रुचाउने अम्बानी भारतमा थुप्रै युवाहरुको प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
उनी व्यवसायमा मात्रै हैन आफ्नो सौखका लागि पनि पर्याप्त खर्च गर्छन् । मानिसले आफ्नो मनले मागेका कुरा पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनी इन्डिय प्रमियर लिग ९आईपीएल० क्रिकेट प्रतियोगिताको टिम मुम्बईका मालिक हुन् ।
← बालबालिकालाई कसरी सिपालु बनाउने ? हरेक अभिभावकले पढ्नैपर्ने कुरा! → रन्जना मैनालीको अस्ट्रेलियामा अर्कै केटा रहेको खुलाशा ! एक झा’पड लगाएपछी नाठो निस्किन्छ भन्दै गर्जिए हरि उदासी